खाद्यान्नमा वार्षिक ५ लाख ७४ हजार किलो विषादी, कस्तो असर पर्छ स्वास्थ्यमा ? – Online National Network
खाद्यान्नमा वार्षिक ५ लाख ७४ हजार किलो विषादी, कस्तो असर पर्छ स्वास्थ्यमा ?
२० पुष २०७४, बिहीबार ०२:३७
काठमाडौं, २० पुस – नेपालमा कृषिजन्य उत्पादनमा विषादीको प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा मात्रै ५ लाख ७४ हजार ६० किलो विषादी खपत भएको छ । यो विषादी खरिदका लागि ६९ करोड ४८ लाख ४ हजार ७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
दीर्घकालीन असर : अन्धोपना, क्यान्सर, ट्युमर, नपुंसकता, बाँझोपन, विकृत बच्चाको जन्म, नसामा समस्या, स्नायु प्रणालीको विकासमा ह्रास, एकाग्रतामा कमी – नयाँ पत्रिका दैनिक